स्थानीय निर्वाचनलाई प्रदेश सिमांकनको विषयसँग जोड्नु हुँदैन - Karobar National Economic Daily
स्थानीय निर्वाचनलाई प्रदेश सिमांकनको विषयसँग जोड्नु हुँदैन
query_builderFebruary 25, 2017 10:30 PM supervisor_account visibility548
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्, कल्याण गुरुङ । नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका गुरुङ कांग्रेसभित्र आशालाग्दा नेताका रूपमा हेरिन्छन् ।
संविधान कार्यान्वयन नै अहिले प्राथमिकता भएको बताउने उनी असन्तुष्ट पक्षलाई समेत सहमतिमा ल्याएर घोषणा भएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, जलविद्युत्, बैंक, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा कांग्रेसकै नीतिका कारण प्रगति भएको दाबी गर्छन् ।
मुलुकको विकास अपेक्षाकृत हुन नसके पनि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा विकास निर्माणका काम नभएको आरोपमा सत्य नभएको उनी बताउँछन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने पार्टी नै कांग्रेस भएको दाबी गर्ने उनी कांग्रेसले विकासमुखी राजनीति गर्दै आएको बताउँछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनसँग प्रदेशको सिमांकनको विषय नजोडिएकाले मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनमा सहभागि हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उनै गुरुङसँग देशको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, संविधान कार्यान्वयनका चुनौती र सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी :
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । मधेस केन्द्रित दल अझै असन्तुष्ट छन्, कसरी सम्भव छ निर्वाचन ?
निर्वाचन भनेको प्राविधिक मात्र होइन, राजनीतिक कुरा पनि हो । त्यसैले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता आवश्यक हुन्छ । अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुनमा छलफल भएर अगाडि बढिरहेको छ । यी सबैका बीचमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य कुरा सबै राजनीतिक दलहरूबीचमा वार्ता हुनुप-यो ।
सहमति, सहकार्य र वार्ताबाट नमिलेका कुरा मिलाउन सकिन्छ । कुन कुरा निर्वाचन पछाडि मिलाउन सकिन्छ ? के कुरासँगसँगै लिएर जान सकिन्छ ? त्यो कुरामा राजनीतिक दलहरूले एकअर्कासँग संवाद कायम राख्नुपर्छ ।
तर, अझै पनि सरकारले घोषणा गरेको मिति वैशाख ३१ मै निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वस्त हुने अवस्था बनिसकेको छ र ?
मूलतः राजनीतिक सहमतिको कुरा हो । सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर निर्वाचन गर्नुपर्छ । अहिले निर्वाचन नगरी संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र ३ तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
तीन तहको निर्वाचन गर्दा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखको ३१ मै सम्पन्न ग-यौं भने अरु तहको निर्वाचनलाई बल पुग्छ । दोस्रो कुरा के हो भने, स्थानीय निकाय गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास हेर्ने हो भने अहिले कर्मचारीको हातमा सत्ता छ ।
१९ वर्ष भइसक्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको । स्थानीय निकायमा गाविसमा गाविस सचिव अध्यक्ष भएर नगरपालिकामा कार्यकारी मेयर भएर, जिल्ला विकासमा जिल्ला विकासको सभापति भएर कर्मचारीले काम गरिरहेको अवस्था छ ।
तर, गाविसको सचिव, नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख र जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लामा नबसिदिने, नगरपालिकामा नबसिदिने, गाविसमा नबसिदिने गरेकाले स्थानीय मानिसलाई दैनिक कामकाजका लागि समस्या भएको छ ।
विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने जित्ने मानिस स्थानीय हुन्छ । स्थानीय मानिस भएपछि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ र विकासका काम पनि अघि बढ्छ । जनताका दिनानुदिनका काममा पनि सहयोग पुग्छ ।
चुनाव हुँदा संविधान कार्यान्वयनको एउटा खुड्किलो पनि पुरा हुने भएकाले वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति र सहकार्य गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेटेर निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
चुनावका चुनौतीको रूपमा मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टिलाई हेरिएको छ । वैशाखअघि नै मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने अवस्था त देखिँदैन नि ?
राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति भयो भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव टुंगो लाग्छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भयो भने संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित हुन्छ ।
मधेस केन्द्रित दलले सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनुप-यो भनेर केही असहमति राखिरहेका छन् । त्यो कुरालाई पनि सरकारले वार्ता गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, प्रदेशको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन फरक फरक विषय हुन् । त्यसैले सिमांकनको विवादले स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने प्रदेशको सिमांकनमा बाधा पुग्दैन ।
हाम्रो संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ मा संघको, प्रदेशको, स्थानीय तहको संघ र प्रदेशको, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिसकिएको छ ।
त्यसैले आन्दोलनरत पक्षले पनि प्रदेशको सिमांकनको कुरालाई मात्र मुद्धा बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बाधापुर्याउनु हुँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ ।
यदि यो संविधान कार्यान्वयन भएन र फेल भयो भने लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पुर्या भने लोकतन्त्रवादीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् । त्यसकारण असन्तुष्टहरूलाई वार्ता र संवादबाट सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले सरकारमा तपाईंको दल पनि छ । सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन, विवादास्पद काम गर्यो भनेर टिप्पणी भइरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो सरकारले कतिपय राम्रा काम गरेको छ भने कतिपय काममा व्यापक असन्तुष्टि आएका छन् । सरकारले गरेका राम्रा काममा पुँजीगत खर्चमा ज्यादा जोड दिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार निर्माण, सडक, पुल बनाउन जोड दिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ज्यादा जोड दिएर किसानलाई कसरी सुविधा हुनसक्छ भनेर त्यसतर्फ पनि काम गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सबै मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा खासगरी ठूला–ठूल परियोजना बन्ने र त्यसमा लगानी आउने क्रम बढेको छ ।
लोडसेडिङ हटाउने काम भएको छ । अनुमानितभन्दा बढी राजस्व उठेको छ । केही राम्रा काम भएका छन् भने केही काममा असन्तुष्टि पनि देखिएका छन् । विशेषगरी राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।
त्यसैले ती राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सरकारले पक्ष वा विपक्ष नहेरी, पार्टी नहेरी स्वच्छ, इमानदार र प्रश्नचिन्ह नउठ्ने खालका मानिसलाई छानेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणालाई सत्ता लम्ब्याउने खेलका रूपमा पनि कतिपयले हेरेका छन् । वास्तविकता के हो ?
हामीले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहयोग गर्दा प्रष्ट भनेका थियौं, आज हामीले तपाईंलाई सहयोग गर्छौं, पछि तपाईंले सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी कुनै दलको पनि पूर्ण बहुमत छैन । ती ठूला दलमध्ये कुनै पनि दलले अर्को दलसँग सहमति नगरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले हामीले माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्दैगर्दा आलोपालोको सहमति भएको हो । हिजो हामीले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग ग-यौं अब उहाँहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा सहमति पालना नहुने समस्या पटकपटक देखा पर्ने गरेको छ । तपाईंहरूबीचको सहमति इमान्दारीपूर्वक पालना होला ?
कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा होस् वा सरकार सञ्चालन र कुनै नीति नियम बनाउँदा होस् इमानदारीतापूर्वक सहयोग गरेको छ । हामीले स्पष्ट रूपमा सरकारका कामकारवाही अगाडि बढाउने कुरामा पनि इमान्दारीपूर्वक सहयोग गरेका छौं ।
त्यति मात्र होइन अहिले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि हरेक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग भइरहेको छ । लोडसेसडिङ मुक्त गर्ने कार्यक्रममा पनि कांग्रेसले सहयोग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व धेरै उठाउने कुरामा होस् या मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा वा परराष्ट्र नीति राम्रो कसरी हुनसक्दछ भन्ने विषयमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पनि भएको छ । अहिलेसम्म हामीले उहाँहरूलाई सहयोग ग¥यौं । अब स्थानीय तह निर्वाचन सकिसकेपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन्छ ।
प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउन पनि कांग्रेस इमान्दारीपूर्वक लाग्छ । संविधान संशोधनमार्फत मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कांग्रेस अगाडि बढ्छ ।
अहिलेसम्म यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सहयोग ग-यौं । अब सरकारको नेतृत्व गर्न र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
सत्ता हस्तान्तरण निर्वाचन अगाडि कि पछाडि ?
यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा पनि संविधान संशोधन गरेर मुलुकको समस्या समाधान गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नु हो ।
संविधान कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । हामीले संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । तर, मुलुकको आर्थिक विकासमा त खासै काम गर्न सकेको देखिएन नि ?
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि खुल्लापनको नीति आयो । त्यही नीतिका कारण देशमा विद्यालय खुले । दोस्रो सञ्चार जगत हेर्नुस् । हिजो केही सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
अहिले सञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको छ । अर्को सडक सञ्जाल हेर्नुस् । आज गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । त्यतिबेला स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुँदानै कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।
त्यो कार्यक्रमका कारण आज देशभरनै बाटो बनेका छन् । गाउँगाउँमा बाटो पुगेका छन् । त्यो नेपाली कांग्रेसकै कारण भएको हो । बैंकहरू खुलेका छन् । आज मुख्य केन्द्रहरूमा शहरीकरण भएको छ ।
हिजो जुन किसिमको बजेट थियो, बजेटको आकार ठूलो भएको छ । हामीले नै भ्याट लागु गयौं । आज भ्याटका कारण राजस्व बढेको छ । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो भयो भने विकास निर्माणका काम हुन्छन् ।
आज सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्का पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । सामुदायिक वन कार्यक्रम कांग्रेसकै पालामा आएको हो । जसले वनजंगल जोगिएका छन् । शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भएका छन् ।
आज गाउँगाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र बनेका छन् । अस्पताल बनेका छन् । यो कांग्रेसकै देन हो । त्यसकारण कांग्रेसले विकासमुखी नै राजनीति गरिरहेको छ ।
कांग्रेसले बजेट जम्मा गर्न त जान्यो तर जनतालाई राहत पुग्ने गरी वितरण गर्न भने जानेन भनिन्छ नि ?
कांग्रेसले विकासमुखी राजनीति गर्दा पहिला बजेट जम्मा गरौं र पछि विकासमा खर्च गरौं भन्छ । तर, अहिले वितरणमुखी राजनीति हुन थालेको छ । राज्यकोषमा बजेट भएन भने भोलि कसरी खर्च गर्ने ? वितरणका लागि पनि पहिला बजेट त जम्मा हुनुप-यो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाउने र विकास निर्माणका काम पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसकारण वितरणमुखी होइन की विकासमुखी बजेट, जनतालाई राहत हुनेगरी बजेट निर्माण गर्न कांग्रेस सँधै अग्रसर छ ।
तपाईंले कांग्रेसले विकासमुखी राजनीति गर्छ भनेर भनिरहँदा कतिपय विकासका काममा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि मुछिएका छन् । विकासमा हुने विकृति रोक्न तपाईंहरूको अग्रसरता कहाँ देखियो त ?
विकासका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने काम प्रशासनको हो । जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ छ । अख्तियार कहाँ कहाँ दुरूपयोग भयो, त्यो उसले हेर्नुप-यो ।
त्यसैगरी सडक, पुल जस्ता विकास निर्माणका काममा गलत काम भएका छन् भने भौतिक तथा पूर्वाधार, यातायात मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ । त्यो मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीले हेरेर गलत गरेको भए सजाय गर्नुप-यो ।
हाम्रो देशको कर्मचारी प्रशासनमा अग्रसरता लिएर काम गर्ने मानसिकता छैन । उहाँहरू केवल अ-हाएको काम मात्र गर्नुहुन्छ । जो मन्त्री हुन्छ, उसको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने गर्नुहुन्छ ।
नेपालको प्रशासनले गर्न सक्ने धेरै ठाउँछन् । तर नगर्दा गलत गर्नेको मनोबल बढ्दै गयो । गलत त कांग्रेसको सरकारको पालामा मात्र होइन, एमाले, माओवादी सबैको पालामा भएको छ ।
मधेस केन्द्रित दलका नेता मन्त्री हुँदा पनि भयो । त्यसैले महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, ठेकेदार पनि इमान्दार हुनुप-यो । कर्मचारी प्रशासनले पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुप-यो । त्यसो भयो भने विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ । विकास निर्माणका काममा बजेटअनुसारकै प्रगति पनि हुन्छ ।
योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कहाँ–कहाँ समस्या देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा तीनवटा कुरा अत्यन्तै उल्टो ढंगबाट भइरहेका छन् । एउटा विकास निर्माणको कार्यक्रम छनोट गर्दा हो । विकास निर्माणको योजना रातो कितावमा आउँछ, त्यो छनोट गर्ने प्रक्रिया नै सत्तामुखी छ ।
जसको सत्ता भयो उसको प्रभाव त्यसमा देखिन्छ । जनताको आवश्यकता, भूगोलको आवश्यकताभन्दा पनि सत्ताले चाहेअनुसारको बजेटमा राख्ने गलत परम्परा छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोग । जो प्रधानमन्त्री भयो उसैले योजना आयोग विस्तार गर्नुहुन्छ ।
सत्ताकै आधारमा योजना आयोगमा नियुक्त हुँदा उनीहरूले सत्ताले जे भन्यो त्यसकै आधारमा काम गर्छन् । तेस्रो कुरा, जुन तथ्यांक चाहिने हो, त्यो हामीकहाँ संकलन हुन सकिरहेको छैन । एउटा तथ्यांक विभाग छ ।
त्यसबाहेक हरेक मन्त्रालयले आ–आफ्नो मासिक तथ्यांक निकालेर प्रगति विवरण निकाल्ने हो भने जनता त्यसबारे सुसूचीत हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रले जसरी अहिले कर्जा बढाइरहेको छ, राष्ट्र बैंकले रोक्न सक्थ्यो ।
यसरी ऋणमा ब्याजदर बढाउँदै जाँदा भोलि उद्योगपति, व्यापारीलाई गा-हो हुन्छ । उद्योगपतिले उद्योग खोलेनन्, व्यापारीले व्यापार गरेनन् भने भोलि रोजगारीका अवसर हुँदैनन् । बेरोजगारी बढ्यो भने मानिस गलत बाटोमा लाग्ने सम्भावना बढ्छ ।
मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिन सकेको छैन । त्यसैगरी हाम्रो ट्याक्स सिस्टममै गडबडी छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको बजेट निर्माणको ट्रेन्ड पनि गलत नै छ । शीर्षक छनोट र बजेट हाल्ने कुरा बदल्नुपर्छ ।
सबै कुरा कर्मचारीको हातमा छ । मन्त्री त देखाउने दाँत मात्र बनेका छन् । मन्त्री नजिकका केही योजना हाल्दिन्छन् खुशी बनाउन । अरु सबै कर्मचारीले आफूअनुकूल गरिरहेका छन् । यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम छैन ।
अर्को कुरा अनुसन्धान भन्ने नै छैन हामीकहाँ । अनुसन्धान भएन भने नयाँ प्रविधिको विकास हुन सक्दैन । त्यसमा कम रकम विनियोजन हुन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गएर हेर्नुभयो भने त्यो थाहा हुन्छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिमा विकास नभई आर्थिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्दैन । मुख्य कुरा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि हो । अर्को उद्योग खोल्नका लागि वातावरण छैन । यी सबै कुरामा ध्यान दियौं भने आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।